Xiriirinta silsiladda silsiladda, siligga siligga siligga, shabaqa wejiga - Gostern
Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag dhan 33000 mitir murabac ah, in ka badan 600 oo shaqaale ah. Waa shirkad gaar ah oo dharbaaxada ah oo naqshadayn karta, soosaari karta isla markaana suuqayn karta.
Qalabka silsiladda / siligga siligga iyo qalabka wiishka ayaa hadda si ballaadhan loogu adeegsadaa birta, mashiinada, jidadka tareenka, baatroolka kiimikada, dekedda, quwadda korontada, awoodda nukliyeerka, militariga iyo qaybaha kale.
Badeecad kastaa si taxaddar leh ayaa loo sameeyaa, waxay kaa dhigi doontaa mid ku qanacsan. Badeecadaheena habka wax soo saarka si adag ayaa loola socdaa, maxaa yeelay waxay kaliya ku siineysaa tayada ugu fiican, waxaan dareemeynaa kalsooni.
Waa shirkad gaar ah oo dharbaaxada ah oo naqshadayn karta, soosaari karta isla markaana suuqayn karta.
Jiangsu Gostern Rigging waa soo saare caan ah oo soo saarta shakaalka, xarkaha ratchet iyo qalabka qaaska ee Shiinaha. Waxaan xoogga saareynaa sameynta cilmi baarista, soo saarida alaabooyin cusub iyo bixinta adeeg habeysan. Waxaan sidoo kale ka caawinnaa macaamiisheenna inay helaan habka ugu habboon ee arrimaha kor u qaadista. Qalabka silsiladda / siligga siligga iyo qalabka wiishka ayaa hadda si ballaadhan loogu adeegsadaa birta, mashiinada, jidadka tareenka, baatroolka kiimikada, dekedda, quwadda korontada, awoodda nukliyeerka, militariga iyo qaybaha kale. Dhawaan, waxaan dhisnay xiriir muddo dheer ah Dongfang Electric, Shanghai Electric, XCMG Group, China CSR, China CNR. Waxaa naloo dhoofiyay Mareykanka, Korea, Thai, Vietnam iyo dalal kale oo bariga Aasiya ah.
Garabka silsiladda lugaha badan
Toddobaadka ugu horreeya ee Ogosto waxaan tababar ku siineynaa shaqaalahayaga qolka kulanka. Ujeedada tababarka ayaa ah xoojinta wacyiga amniga iyo hubinta opera ...
Si loo xoojiyo shaqaalaheena waxaan qabanqaabinay dabaqeena sare sidii Jiimkeena, qaar badan oo ka mid ah shaqaalaheennu waxay aadi karaan inay ka shaqeeyaan oo ay xiriir la yeeshaan dadka kale. Abuuritaanka fursad badan iyo opp ...
Asalka Qalabka iyo Qalabka Midd ...
Lixda waddan ee Khaliijka (Isutagga Imaaraatka Carabta, Sacuudi Carabiya, Cummaan, Baxreyn, Qatar iyo Kuweyt) waa naadiga dunida hodanka ka ah, oo leh 45% kaydka saliidda adduunka iyo ...
Jiangsu Gostern Rigging waa soo saare caan ah oo soo saarta shakaalka, xarkaha ratchet iyo qalabka qaaska ee Shiinaha.
Cinwaanka: No 188, Longgang Road, Gaogang Degmada, Taizhou City, 225300, Jiangsu, Shiinaha